दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक (तिहार) सुरु – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक (तिहार) सुरु
By Digital Khabar Last updated Oct 25, 201930
नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक अर्थात तिहार आजदेखि सुरु भएको छ । कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि सुरु हुने तिहार आजदेखि सुरु भएको हो । शुक्रबार बेलुकी यमदीपदान सुरु गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
यस कागतिहार भने भोलि कार्तिक ९ गते परेको समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । धनवन्तरी जयन्ती र धनतेरस पर्व पनि शनिबार नै परेको छ । तिथि घटबढका कारण यस्तो भएको समितिले जनाएको छ ।
कार्तिक १० गते आइतबार विहान नरक स्नानसहित कुकुर तिहार र बेलुकी लक्ष्मीपूजा छ । गाई, गोरु र आत्म पूजा कार्तिक ११ गते सोमबार परेको छ । ११ गते विहान ९ः४३ बजेसम्म औंशी तिथि छ । त्यसपछि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा प्रारम्भ हुने भएकाले आत्मपूजा यसै दिन परेको छि ।
तिहारको मुख्य दिन कार्तिक १२ गते मंगलबार परेको छ । विहान ११ः ५५ बजे भाईटिकाको साइत उत्तम रहेको अध्यक्ष गौतमले बताए । दिनभर भाईटिका लगाउन बाधा नपर्ने पनि समितिले उल्लेख गरेको छ । कार्तिक १२ गते भाइटिकाकै दिन यस वर्ष नेपाल संवत्अनुसार नयाा वर्ष मनाउनुपर्ने पनि समितिले जनाएको छ ।
प्रतिपदाका दिन सूर्योदय भएकै दिन नयाँ वर्ष मनाउनुपर्ने शास्त्रीय वचनअनुसार यस्तो निर्णय गरिएको हो । यसैदिन नेपाल संवत ११४० सुरु हुँदैछ । भाईटिकासंगै नेवारी भाषामा किजापूजा पनि कार्तिक १२ गते नै गरिन्छ ।
आलमलाई तेस्रोपटक ८ दिनका लागि म्याद थप